avylavitra · Desambra 2020 · Global Voices teny Malagasy
avylavitra · Desambra, 2020
Lahatsoratra farany an'i avylavitra tamin'ny Desambra, 2020
El Salvador 31 Desambra 2020
Maro dia maro ny olona erantany, sy ao Salvador, no tratry ny aretina mitaiza mahazo ny voa (MRC) noho izy ireo ianjadian'ny vokatra simika fampiasa amin'ny fambolena ary ny tsy fahampian-drano.
Lasa mpirafy ve i Beijing sy Carrie Lam avy ao Hong Kong?
Azia Atsinanana 29 Desambra 2020
Nikomy tamin'i Carrie Lam, lehiben'ny mpantanteraka, ny ankolafy mpomba an'i Beijing tao Hong Kong, tamin'ny fampiasàna ho antony ny tsy nahavitàn'ny tanàna nifehy ny fiparitahan'ilay valanaretina COVID-19.
Eoropa Afovoany & Atsinanana 10 Desambra 2020
Resahan'ireo lalàna vaovao ny endrika maro amin'ny dingana momba ny heloka bevava, isan'izany ny fanitàrana ny famaritana ny atao hoe fanolanana, izay noarahabain'ireo mpikatroka. Mbola misy anefa teboka hafa naharaisana fanehoankevitra mifamahofaho
Pakistàna : Nibaboka ilay mpamono olona misesisesy fa nampiasa ny tambajotra sôsialy hamandrihana ireo pelaka hovonoiny
Azia Atsimo 03 Desambra 2020
Nanamafy ilay voalaza ho mamono olona fa mba hiampangàna ny fiparitahan'ny fametavetàna zaza no antony. Atahoran'ireo mpikatroka sasany ny hitehafana azy ho toy ny maherifo